Nzira Yokuswedera Nayo Pedyo naMwari | Swedera Pedyo
Unonzwa uri pedyo naMwari here? Kuvazhinji, izvozvo zvinoita sezvisingabviri zvachose. Vamwe vanotyira kuti ari kure kure; vamwe vanonzwa vasina maturo, vasina kana tariro. Zvisinei, Bhaibheri rinotikurudzira norudo kuti: “Swederai pedyo naMwari, uye achaswedera pedyo nemi.” (Jakobho 4:8) Anotopikira vanamati vake kuti: “Nokuti ini Jehovha, Mwari wako, ndichabata ruoko rwako rworudyi, ndichiti kwauri: Usatya, ini ndichakubatsira.”—Isaya 41:13.
Tingasvika sei pakuva noukama hwepedyo zvakadaro naMwari? Muushamwari hwoga hwoga, tinosimbisa ukama hwacho nokuziva munhu wacho, kumuyemura nokukoshesa unhu hwake hunomusiyanisa nevamwe. Naizvozvo unhu hwaMwari nenzira dzake, sezvinoratidzwa muBhaibheri, zvinhu zvinokosha kudzidza. Kufungisisa nzira iyo Jehovha anoratidza nayo unhu hwake hwose, tichiona nzira iyo Jesu Kristu akahuratidza nayo sezvahuri chaizvo, uye tichinzwisisa nzira iyo isuwo tingahukudza nayo matiri zvichatiswededza pedyo naMwari. Tichaona kuti Jehovha ndiye Changamire ane kodzero uye akarurama wezvakasikwa zvose. Chinotokosha zvikuru, ndiBaba vatinoda tose. Vane simba, vanoruramisira, vakachenjera, uye vane rudo, havambosiyi vana vavo vakatendeka.
Bhuku rino ngarikubatsire kuramba uchiswedera pedyo naJehovha Mwari, kusimbisa ukama husingambozoparadzwi, kuitira kuti ugone kurarama uchimurumbidza nokusingaperi.
Swederai pedyo naJehovha—Sumo